अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रचण्ड र नेपालको अन्तिम तयारी…हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौ नेपाल क,म्युनिस्ट पार्टीभित्रको वि,वाद सहमतितर्फ उन्मुख हुँदा माहोल फेरि बिग्रिएको छ । ‘अर्ली महाधिवेशन’ मा लचिलो भइसकेका प्रचण्ड एकाएक बिच्किएका छन् । ओलीसँग सहमति गरेर भन्दा सं,घर्ष गरेर अगाडि बढ्ने संकेत प्रचण्डले गरिसकेका छन् । उनले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सार्वजनिक रुपमै पार्टी फुटाउन खोजेको आ,रोप लगाएर त्यस्तो सं,केत गरेका हुन् ।
हत्तपत्त गम्भीर विषयमा बाहिर नबोल्ने प्रचण्डले हिजो दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र त,रंग आएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको पटक पटकको संवादपछि पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको बुझिएको छ । दुवै नेता अ,डानमा टसमस नहुने र ओलीलाई वैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीबाट ह,टाउने र,णनीतिका साथ प्रस्तुत हुने नि,र्णयमा पुगेको बुझिएको छ । यसका लागि संसदीय प्रक्रियाबाट बढ्ने तयारीहरु भएका छन् । अन्य दलका प्रभावशाली नेताहरुसँग पनि भित्र भित्र परामर्श थालेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूहरु एकजुट भएमा ओली हटाउन सकिनेबारे छलफल समेत गरेको बुझिएको छ । अब ओलीले पार्टी फुटाएर गएपनि हटाउने कदम चाल्ने नि,र्णयमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पुगेका छन् । त्यसको संकेत माधव नेपालका विश्वासपात्र विष्णु रिजालले ट्वीटर गरेर दिएका छन् । रिजालले २०५६ सालमा एमालेबाट फुटेको मालेको उदाहरण दिदै भनेका छन्, ‘संसदबाट जन्मिएको दलको अ,न्त्य पनि संसदमै हुन्छ ०५६ साल साक्षी छ । रिजालले कसैले नेकपा फुटाएर गएमा त्यसले आकाल नलिंदै त्यसको आयु सकिने समेत भनेका छन् ।’
अब प्रचण्ड र माधव नेपाल ओलीवि,रुद्ध क,डा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत मिलेपछि सम्भावित घ,टनाक्रमको विश्लेषण गर्दै रिजालले पछिल्लो टिप्पणी गरेका हुन् । उनको संकेत अब संसदको अंकगणितमा जाने र त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्ने सम्मको छ ।
आफूवि,रुद्ध सम्भावित कदमलाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका छन् । दुवैबीच भविष्यमा बन्ने राजनीतिक परिस्थितिमा मिलेर बढ्न सकिने विषयहरुबारे छलफल भएको बुझिएको छ । ओलीले आफूवि,रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकिने विषयलाई दृष्टिगत गरी आफ्ना नि,कटस्थहरुलाई सम्भावित परिस्थितिका लागि तयार हुन भनिसकेका छन् ।
हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ओलीलाई हटाउनेबारे प्रस्ताव गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने देखि ओलीलाई बि,दा गरी नेकपाबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । विशेष अधिवेशन बोलाउन संसदको कम्तिमा २५ प्रतिशत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको निवेदन सभामुख समक्ष पुग्नुपर्छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी सांसद संख्या नेकपा र नेपाली काँग्रेससँग मात्र छ । जसपासँग त्यो संख्या छैन । जसपाले काँग्रेससँग मिलेर विशेष अधिवेशनमा जानेबारे छलफल बढेको छ । काँग्रेसलाई त्यस दिशातर्फ बढ्न नदिन ओलीले देउवासँग सामिप्यता बढाइरहेका छन् ।
नेकपाभित्र ओलीको टरिसकेको सत्ता सं,कट फेरि ब्युँतिरहँदा नयाँ घ,टनाक्रम विकास भएको छ । यसले फेरि टकराव बढ्ने र दुवै पक्ष संसदको वैधानिक प्रक्रियामा जानसक्ने देखिएको छ ।-
Previous एक्कासी हेलिकप्टर चार्टर गरेर रबि लामिछाने किन पुगे म्याग्दी ? यस्तो छ कारण…हेर्नुहोस।
Next प्रधानमन्त्री हुँदा नक्साको कुरा थाहा नहुनेले मैले हो भन्न कसरी सकेको – मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल…हेर्नुहोस।